နောက်ဆုံးရ လီဗာပူးလ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၄.၉.၂၀၂၀ – Sports A2Z
–	ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဒီ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီမှာမှ စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ နီကေ ဖလိုက် ဘောလုံးကို ဟက်ထရစ်သွင်းယူပြီး ပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမားအဖြစ် လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလားက မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့။
40 – Mohamed Salah's hat-trick yesterday was the 40th scored byaLiverpool player in the Premier League, more than any other side in the competition. Naughty. pic.twitter.com/kowlc4GSzE
–	ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အသင်းလိုက် ဟက်ထရစ်ရရှိမှုစာရင်းမှာ အားလုံးရဲ့ ထိပ်ဆုံးကနေ ၃၉ ကြိမ်စီနဲ့ ဦးဆောင်နေခဲ့တဲ့ တွဲဖက်စံချိန်ရှင် အာဆင်နယ်အသင်းကို မနေ့ညက သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဆာလားရဲ့ ဟက်ထရစ်နဲ့ တစ်ကြိမ်ပိုပြီး ဦးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Opta Joe က ဖော်ပြ။
–	သီယာဂိုအနေနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာဖို့ မလွယ်တော့တာကြောင့် နည်းပြ ယာဂန် ကလော့ပ်အနေနဲ့ အသင်းကနေ ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဆားဘီးယားကွင်းလယ်လူ မာကို ဂရူယစ်ခ်ျကို ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး အသင်းမှာ အနည်းဆုံး ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလအထိ အသုံးပြုသွားမယ်လို့ အေးဂျင့်ဆို။
–	လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်တောင်ပံကစားသမား ဂျက် ဟာရီဆန်ရဲ့ ဘယ်တောင်ပံ တောက်လျှောက်ဆွဲပြေးပြီး အတွင်းကို ဆွဲဝင်ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ ဂျိုးဂိုမက်ဇ်ကို ပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်နေကြပြီး လာမယ့်ပွဲမှာ ဂျိုယယ်လ် မာတစ်ပ်နဲ့ အစားထိုးဖို့ တိုက်တွန်းနေကြ။
–	ဘာစီလိုနာနည်းပြ ရော်နယ်လ် ကိုးမန်းရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက လီဗာပူးလ်အသင်းတိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလားကို ဒတ်ခ်ျနည်းပြက နူးကမ့်ကို ခေါ်ဆောင်ဖို့ အလိုရှိနေကြောင်းနဲ့ ကစားသမားကလည်း စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ထုတ်ဖော်။
–	အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကို အားဖြည့်ဖို့နဲ့ လက်ရှိ MSF တိုက်စစ်အတွဲကို ကူညီနိုင်ဖို့ အစ္စမိုင်လာ ဆားရ်ကို ခေါ်ယူသင့်ကြောင်း ကစားသမားဟောင်းတွေက တိုက်တွန်းနေကြချိန်မှာပဲ သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ လက်စတာစီးတီးအသင်း ကြားဝင်လာခဲ့။
–	လီဗာပူးလ်အသင်းက အလိုရှိနေခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ သီယာဂို အယ်လ်ကန်တာရာအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ဘက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သဘောတူညီနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အင်ဒီပန်းဒန့် ဖော်ပြ။
–	ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဒီ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီမှာမှ စတငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ နီကေ ဖလိုကျ ဘောလုံးကို ဟကျထရဈသှငျးယူပွီး ပထမဆုံးပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမားအဖွဈ လီဗာပူးလျတိုကျစဈမှူး မိုဟာမကျ ဆာလားက မှတျတမျးဝငျနိုငျခဲ့။
–	ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အသငျးလိုကျ ဟကျထရဈရရှိမှုစာရငျးမှာ အားလုံးရဲ့ ထိပျဆုံးကနေ ၃၉ ကွိမျစီနဲ့ ဦးဆောငျနခေဲ့တဲ့ တှဲဖကျစံခြိနျရှငျ အာဆငျနယျအသငျးကို မနညေ့က သှငျးယူခဲ့တဲ့ ဆာလားရဲ့ ဟကျထရဈနဲ့ တဈကွိမျပိုပွီး ဦးဆောငျနိုငျပွီဖွဈတယျလို့ Opta Joe က ဖျောပွ။
–	သီယာဂိုအနနေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးကို ပွောငျးရှလေ့ာဖို့ မလှယျတော့တာကွောငျ့ နညျးပွ ယာဂနျ ကလော့ပျအနနေဲ့ အသငျးကနေ ရောငျးခဖြို့ ပွငျဆငျထားတဲ့ ဆားဘီးယားကှငျးလယျလူ မာကို ဂရူယဈချြကို ပွနျလညျချေါယူပွီး အသငျးမှာ အနညျးဆုံး ဆောငျးရာသီ အပွောငျးအရှကေ့ာလအထိ အသုံးပွုသှားမယျလို့ အေးဂငျြ့ဆို။
–	လိဒျဈယူနိုကျတကျတောငျပံကစားသမား ဂကျြ ဟာရီဆနျရဲ့ ဘယျတောငျပံ တောကျလြှောကျဆှဲပွေးပွီး အတှငျးကို ဆှဲဝငျကနျသှငျးခဲ့တဲ့ ဂိုးကို မတားဆီးနိုငျခဲ့တဲ့ နောကျခံလူ ဂြိုးဂိုမကျဇျကို ပရိသတျတှေ စိတျပကျြနကွေပွီး လာမယျ့ပှဲမှာ ဂြိုယယျလျ မာတဈပျနဲ့ အစားထိုးဖို့ တိုကျတှနျးနကွေ။
–	ဘာစီလိုနာနညျးပွ ရျောနယျလျ ကိုးမနျးရဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ မိတျဆှတေဈဦးက လီဗာပူးလျအသငျးတိုကျစဈမှူး မိုဟာမကျ ဆာလားကို ဒတျချြနညျးပွက နူးကမျ့ကို ချေါဆောငျဖို့ အလိုရှိနကွေောငျးနဲ့ ကစားသမားကလညျး စိတျဝငျစားနကွေောငျး ထုတျဖျော။
–	အသငျးရဲ့ တိုကျစဈပိုငျးကို အားဖွညျ့ဖို့နဲ့ လကျရှိ MSF တိုကျစဈအတှဲကို ကူညီနိုငျဖို့ အစ်စမိုငျလာ ဆားရျကို ချေါယူသငျ့ကွောငျး ကစားသမားဟောငျးတှကေ တိုကျတှနျးနကွေခြိနျမှာပဲ သူ့ကို ချေါယူဖို့ လကျစတာစီးတီးအသငျး ကွားဝငျလာခဲ့။
–	လီဗာပူးလျအသငျးက အလိုရှိနခေဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူ သီယာဂို အယျလျကနျတာရာအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျဘကျ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးက ပုဂ်ဂိုလျရေး သဘောတူညီနိုငျခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး အငျဒီပနျးဒနျ့ ဖျောပွ။